Semalt Expert: Ny SEO Anaty Faktoren Wichtiger Keywords
Ny SEO-Optimierung dia mifototra amin'ny karoka voafaritra sy ny fampidiram-pananana ireo tranonkala ho an'ny onsite- sy offsite-optimimierung. Ny fampiasana tenimiafina dia manan-danja amin'ny SEO. Raha toa ka ampiasain'ny tetikady ho toy ny teboka iray dia afaka manohitra ny mpikarama. Ny fampiasana ny fampiasana ny tenimiafina dia mety hitarika ho amin'ny fanamelohana, na ho an'ireo izay miasa ao aminy, dia miala amin'ireo hafa manan-danja ara-politika. Ny mpikaroka dia tokony hifantoka amin'ny lehibe kokoa ny toerana iantsenan'ny tetikasa fanatsarana - empresas de hosting en espaa.
ny Customer Success Manager von Semalt ,Frank Abagnale, manazava hoe inona avy ireo lafiny amin'ny onsite-Optimierung tena manan-danja indrindra.
Ny toerana misy ny fitenenana eto amin'ny pejy dia manan-danja kokoa noho ny habetsahana izay ahitanao azy. Ohatra, ny lohan-tserika dia ambony kokoa noho ny footzeile na ny afovoany fananana ho an'ny fampahalalana maro. Ny fofona amin'ny teny fanalahidy ao amin'ny lahatsoratra dia afaka manova ny hatsaratsarana, ny votoatiny azo ampiasaina ary ny zava-dehibe ao amin'ny tranokalan'ny tranonkala.
Semantische Suche und Vor-Ort-Analyse
Google dia miorina amin'ny fampiasana ny tenimiafina fitenin'ny sokajy ho block mba hampitaha ny fampifanarahana amin'ny fitadiavam-panontaniana. Mampihatra ny fikarohana avy amin'ny Google amin'ny finday hahafantarana ny fangatahana fohy mba hahafantarana ny tanjon'ny tranonkala. Mampiasa ny fiteny semantika fampiasa amin'ny fiteny ary mandrindra azy ireo amin'ny fangatahana fanadihadiana, iray izay fantatra amin'ny anarana semantika. Ny tombontsoa azo avy amin'ny semantika dia ny hoe tsy manan-danja ny fampiasana ny teny filamatry ny teny fanalahidy, raha toa ka mifanaraka amin'ny tontolon'ny fifandraisana izy ireo..Ny entrepreneur dia afaka mifantoka amin'izao fotoana izao, izay mahasarika ny raharaham-barotra sy ny marika.
Fikatsahana toerana sy tranokala
Ny tranonkala dia tokony hampiasa mora kokoa mba hahafantarana azy ireo. Google dia mametra-pialàna amin'ny, amin'ny fahazoan-dàlana ahafahan'ny tranonkala mora mora hita. Ny tranokalam-pifaneraserana sy ny tranokala miaraka amin'ny tranonkalan'ny tranonkala, izay ahitana ny submissions, dia manjary mihoatra noho ny tranonkala iray ahitana ny rohy rehetra azo ovaina. Sitemaps sy Traditional Standby Options tahaka ny Contact-, Über- und Serviceseiten sind hervorragende Ressourcen. Ny votoatin'ny tranonkala dia tsy misy dikany, raha misy rafitra mafonja sy mahaliana.
Website-Speed ​​und Sicherheit
Nahazo ny fifaninanana sy ny fampiasana ny tambanjan-tserasera maro kokoa, amin'ny Speed, Ranking-Factor, dia manjaka kokoa Traction. Mitondra ny kitapom-bary miafina, mampihena ny sary sy tsy ilaina. Ny fandikana dia ny fahafaha-manatsara ny habetsaky ny tranonkala. Ny Websicherheit dia manan-danja ihany koa, ary ny tranonkala miaraka amin'ny SSL-Encryption (antsoina hoe https :) dia mahatsapa ny vokany. Ny tombontsoan'ny toerana misy ny fiarovana dia manjary miakatra mandritra ny vanim-potoana.
Ny tranonkala Mobile Friendly dia mahazo ny laharana-Boost raha oharina amin'ireo izay tsy misy. Google dia namoaka vaovao izay manova ny fomba amam-panao, toy ny tranonkala tsy misy namana afaka mamaritra. Google manaparitaka ny tranonkala Google, izay tsy hahatratra ny fahatongavana. Na dia misy tranonkala efa alefa lavitra aza dia, ny Googles Action dia maneho ny fahatsapana ny fahatsapana ho an'ny fahaleovan-tena, izay tokony hanatsara ny fampiasana ny mpampiasa, ary ny tsy fisian'ny zavatra tsy misy dikany.
Ny lahatsoratra dia maneho fa ny fampiasana ireo paikady mifandraika amin'ny fampiharana ny tenimiafina dia tsy misy lanjany amin'ny asany, toy ny teny hilalaovan'ny fikarohana na ny fampisehoana fifaninanana fifaninanana. Ireo singa-endritsa dia manatsara ny fahaiza-mampiasa, manatsara ny habetsaky ny tranonkala, ary manampy mba hisorohana ny sazy. Ho an'ny mpividy Tolotra nomerika fahaleovan-tena ,
Ny fampiasana fitaovam-